Minisitra vaovao: maika ny fampandrosoana | NewsMada
Minisitra vaovao: maika ny fampandrosoana
Par Taratra sur 25/01/2019
Anisan’ny ifantohan’ny sain’ny maro ny sehatry ny toekarena sy ny fampandrosoana. Maika ny asa satria mila vokatra ao anatin’ny fotoana fohy ny filoha Rajoelina Andry.
Maromaro ny minisitera natambatra ao anatin’ity governemanta vaovao ity ny mikasika ny tontolon’ny toekarena sy ny fampandrosoana. Anisan’izany ny toekarena sy ny vola, tantanin’ny minisitra Randriamandranto Richard, raha nisaraka ny toekarena (niaraka tamin’ny Indostria tany aloha), ary niaraka ny vola sy ny tetibola. Miaraka tantanin’ny minisitra Andrianainarivelo koa ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy raha nahaleo tena ity farany tany aloha. Natambatra koa ny minisiteran’ny Angovo, ny rano ary ny akoranafo, tantanin’Andriamanga Vonjy, raha nisaraka ny lafiny Rano tany aloha. Lasa minisitera iray koa ny lafiny Indostria, ny varotra ary ny asa tanana eo ambany fiahian’ny minisitra Rakotomalala Lantosoa. Nikambana tamin’ny Kolontsaina ny asa tanana tany aloha.
Fanatanterahana ny IEM
Araka ny efa novoizin’ny filoha Rajoelina Andry, nohamafisiny, omaly, fa misy ny vinanasa ary maika ka tsy maintsy atomboka sy ny asa. Hotombanana ny zava-bitan’ny minisitra tsirairay ao anatin’ny enim-bolana ary hojerena ny zava-bita ao anatin’ny herintaona.
Tena mahamaika ny rehetra ny fanatanterahana ny votoatin’ny IEM (Finiavana ho fisandratan’i Madagasikara) amin’ny lafiny toekarena sy ny fampandrosoana. Anisan’izany ny fampiroboroboana ny angovo ka hampitomboana avo roa heny ny vokatra herinaratra eto Madagasikara. Eo koa ny fananganana fotodrafitrasa maro, toy ny tanàna Tanamasoandro, ny fanamboran-dalana, ny fanokafana ny tsena mora sy ny fivarotana vary mora.